आज कम्युनिस्ट सरकारको दोस्रो बजेट आउँदै, कति बढ्ला वृद्धभत्ता र तलब ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
आज कम्युनिस्ट सरकारको दोस्रो बजेट आउँदै, कति बढ्ला वृद्धभत्ता र तलब ?
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, जेष्ठ १५, २०७६
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपराह्न ४ बजे बस्ने संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १४ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने चापले संघीय बजेटको आकार १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ ।
१५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार बजेटका रुपमा पनि आगामी बजेटमा सरकारले केही महत्वपूर्ण परियोजना घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमार्फत नै आगामी चार बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकाले बजेटले त्यसको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवमा करिब आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खासगरी वृद्धभत्ताबापतको रकम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी छ । कर्मचारीको तलब पनि न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार बजेटका रुपमा पनि केही नयाँ कार्यक्रम यस अन्तर्गत घोषणा हुनेछन् । बजेटमार्फत सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका खास क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास बजेटमार्फत हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि बजेटमार्फत विशेष किसिमको घोषणा हुने अनुमान छ ।
भेलिदेखि टाटाको कार मेला सुन्दर नगरी इटहरीमा शुरु हुदै
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ‘बचत पनि बीमा पनि’ बचत खाता योजना
सगरमाथाको चुचुरोमा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको झण्डा
एनआईसी एशिया बैंककोे थप दुईवटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा
कतिले कारोबार भइरहेको छ सुनचाँदीको मुल्य ?